Gaazexeessitoonni EBC maaliif biyya deemanitti hafuu? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fuula FB EBC
Gaazexeessitoonni buleeyyii Korporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa (EBC) waggoota dheeraadhaaf dhaabbaticha keessa tajaajilaa turan 4 ji'oota muraasa darban keessa hojiif gara biyyoota gama Lixaa deeman kolu-galtummaa gaafachuun achitti hafaniiru.
Gaazexeessitoonni EBC kunneen biyya deemanitti maaliif hafu?
Gaazexessitoota kunneen keessaa tokko EBC waggoota 9f rippoortara irraa hanga sadarkaa Itti-aanaa Gaggeessaa Kutaa Oduutti kan tajaajile Bilaal Warquu isa tokkodha.
Bilaal Warquu Wiixata darbe Kora Invastimantii UK-Afrikaa gabaasuudhaaf jila Ministira Muummee Itti-aanaa Obbo Dammaqaa Mokonnoniin durfamu waliin gara Landan imaluun achumaan kolu-galtummaa gaafachuu isaa BBCf mirkaneesseera.
Gaazexeessaa Bilaal Warquus ta'e kanneen biroo akka sababaatti kan himatan hojii keenya akka ogummaan gaazexeessummaan nurraa barbaaduun walaba ta'anii hojjechuu akka dandeenyedha.
'Tajaajilli Tigiriffaa piropogaandaa TPLF tamsaasuuf ta'uu hin danda'u'
Aanga'oota gubbaatii jiranirraa ajajamee kan dhufe qofatu hojjetama kan jedhan gaazexeessitoonni kunneen, hojii keessa seentummaatu jiraadha.
Itti-aanaa Hogganaa EBCfi Itti-gaafatamaa Damee TV kan ta'an Obbo Abduljaliil Hamiin garuu walabummaan hojii hin jiru himannaan jedhan gonkuma fudhatama kan hin qabnedha jedhu.
"Keessa seentummaan homaatuu hin turre. Akkaataa imaammata gulaalliitiin hojjetaa turan. Hooggana haaraa taanee dhiyeenya kan itti dabalamne nuti. Kanaan duras hoogganaa duraan ture ka'ee haaraan ni muudama.
Kun waan haaraa miti. Gaazexeessaa Bilaal Ministira Muummee Itti Aanaa waliin hojiif ergame. Tarii itti tolee fedhasaatiin hafuu danda'a malee wanti hojiisaa keessa seenee dhiibbaa irraan ga'e hin jiru," jedhan Abdujaliil.'
Gaazexeessaan kun fakkeenya inni kaasee komii dhiyeessu tokko dhimma barattoota Yuniversitii Dambi Doolloo 'ugguraman' jedhamedha.
Dhimma kana hojjechuuf irra deddeebiin gaaffii kaasanis dhowwamuu kan dubbatu Bilaal, "Haala akkasiitu walabummaan hojii akka hin hojjenne nu godhe," jedheera.
Kana ilaalchisuun Obbo Abduljaliil, "Waa'ee Yuniversitii Dambi Doolloo akka miidiyaa biyya kanaatti nutu jalqaba hojjete natti fakkaata.
Oduun kan filatamu imaammata gulaallii dhaabbatichaarratti hundaa'uudhaani. Akkaataa rakkoo uumame hammeessuun osoo hin taane haala biyyi tasgabbooftuun hojjetama.
Yaada waa'ee Yuniversitii Dambi Doolloo kan fideyyuu isuma. Gareen tokko garas imalee akka hojjetu murteessineerra. Garee sana kan dursan keessa jira Bilaal. Nuti hojiin keenya kallattii kennuu qofa. Akkaataa hojii kan murteessu isaani.
Mana keessaa nyaataa ture maqaa balleessee deemuu barbaade yoo ta'e homaa kanaan walitti hin hidhatu."
Gaazexeessitoonni EBC akka maqaan isaanii hin eeramne barbaadan biroon dhiyeenyuma hojiif gara biyyoota alaa deemanii achiin hafanis walabummaan hojjechuu akka dadhaban dubbatu.
Keessattuu ibsi haala garaagaraa irratti ba'u akka hin dabarre dhorkama, kan dhaabbatichi fedhe qofatu darba jechuun komatu.
Akka fakkeenyaatti yeroo kaasan ibsi Sinoodosiin Itoophiyaa hundeeffamuu Mana Lubummaa Oromiyaa ilaalchisuun baase akka hin dabarre dhorkameera, kan paartiin TPLF baasus akka hin dabarre dhorkameera jedhu.
Obbo Abduljaliil garuu hojiin hojjetamu haala nageenya biyyaaf rakkoofi sodaa hin taaneen jedhu.
"Ibsas ta'e ejjennoon qaama kamiiyyuu biyya keenya kan balaarra buusu yoo hin taane wanti qilleensarra hin oolleef hin jiru.
Hanga ammaatti ibsi nuti osoo hin dabarsin hambisne hin jiru. Hojii nuti hojjennurratti qaamoleen dhiibbaa uuman jiraachuu danda'u.
Qaama mootummaa keessaas jiru. Nuti garuu imaammata gulaallii keenya wabii godhannee qaamolee dhiibbaa nurratti geggeessan ofirraa qolachuudhaan sagantaa hojjenne hunda dabarsaa turreerra.
Image copyright Bilaala Warquu
''Biyya walabummaan miidiyaa keessatti hin mirkanoofnetti dhiibbaatu narra ga'e jedhanii baqachuun sirrii miti," jechuun ibsan.
Komii gaazexeessitoon kaasan keessaa kan biraan ammoo ogeeyyiin miidiyaa akkaataa ogummaatiin osoo hin taane akka waan mana maree federeeshinii ta'ee kootaa sabaatiin bakki kennamaa jira kan jedhuudha.
Kanarrattis Obbo Abduljaliil, Itoophiyaan biyya sabaafi sablammootaati waan taatee miidiyaan kun ammoo kan lammiilee Itoophiyaa hundaati jedhan.
"Kanaafuu saba hundarraa namni maaliif EBC gale jechuu hin dandeenyu. Hamma nuti beeknutti garuu ogeeyyiin sadarkaa barnootaa qabaniin qacaramu.
Hedduunsaanii digirii mastireetii qabu. Akka durii muudamni hin jiru. Kan muudamu nama muraasa. Ogeeyyiin sadarkaa garaagaraa irratti kan ramadaman sadarkaan barnootaa, muuxannoo hojiifi dandeettiin afaanii isaanii ilaalameeti."
EBC: 'Tajaajilli Tigiriffaa piropogaandaa TPLF tamsaasuuf ta'uu hin danda'u'